Imithombo yeendaba ye-G3 G4 yoMgangatho weMigangatho yokuCoca iMithombo yeNdawo yokuTshiza - China G3 G4 Ifayibha yeglasi yokuGqithisela uMgangatho weMithombo yeendaba yokuCoca uMthengisi, Factory -Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Izinto zokucoca kwangaphambili
Ikhaya>iimveliso>Ukucoca uMoya woShishino>Amacebo okucoca kwangaphambili>Izinto zokucoca kwangaphambili
Imiqulu yemidiya isetyenziselwa ukusika iiphedi ukusukela kwiiphedi ezincinci zokucoca ezisetyenziselwa ukucoca izinto zokucoca, ukuya kubukhulu obukhulu obusetyenziswa kwizicelo zempeyinti ukuqinisekisa ukuba iziphumo zemizobo zilungile.
ucrresh ubonelela ngemithombo yeendaba kububanzi obahlukeneyo, ubukhulu kunye neeklasi zokucoca ulwelo ukuze zilungele uninzi lwezicelo. Abathengi banokukhetha phakathi kwemithombo yeendaba eyenziweyo okanye intsebenzo ephezulu yeglasi yemithombo yeendaba.
I-ucfresh inokuhambisa kwakhona iiphedi ezisikiweyo ezenziwe kwangaphambili ukuhlangabezana nokusetyenziswa kunye neemfuno ezithile.
ezinye kunye nokusetyenziswa okufanayo. Imiqulu yemidiya ithengiswa kwiiklasi zokucoca ulwelo G3 ukuya kuF5.
Imidiya: Ifayibha yeglasi.
Ukucetyiswa kokugqibela okucetyiswayo: 150Pa
Iglasi intambo 1.Continuous ifayibha, nentlaka ebotshelelwe kunye nabanye, isakhiwo iyunifomu, ilastiki. Ukusebenza ngokugqwesileyo kokucoca ulwelo lomoya emoyeni
2.Kusuka emlanjeni ukuya emazantsi, uxinizelelo lwefibre utshintshile ukusuka kukhululekile ukuya kuxinana, ukuze ufumane ingqokelela epheleleyo yamasuntswana
Ubushushu 3.High ukumelana (ukuya ku 150ºC)
4.Ukufuma: 100% RH
Ubukhulu vs Ukusebenza kakuhle ngokuchasene nokwehla kweendaba
Uxinzelelo lokwehla （Pa）
I-W × L (m)
Ukuzibandakanya ekudaleni imeko-bume ecocekileyo nentsha yabantu, iSffiltech ikhethekileyo kwimithombo yeendaba yeglasi. Njengomnye wabenzi nabathengisi ababalaseleyo, sinokuqinisekisa ukuba umgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuzinzileyo kweemveliso zethu zesiko. Nceda uqiniseke ukuba uyayithenga.
Icebo lokucoca ulwelo Nge Metal enemingxuma